Ibsa Ejjennoo Miseensotaa fi Deggertoota ABO Biyya Ayeerlaand – Kichuu
HomeNewsAfricaIbsa Ejjennoo Miseensotaa fi Deggertoota ABO Biyya Ayeerlaand
Ibsa Ejjennoo Miseensotaa fi Deggertoota ABO Biyya Ayeerlaand
Gantuu fi Galtuun Maqaa ABOtiin Daldaltu Cimsinee Mormina!
Torbee kana keessa maqaa ABO, dhaaba keenya kabajamaa fi seer-qabeessa ta’een, warri gantuu fi galtuu ta’an bobaa ilmaan Oromoo diinaaf hojjettu jelatti Kora Sabaa waamtee uummata Oromoo burjaajessuuf yaaluu ishee dhageenyee.
Garaaf buleyyii fi gantoonni ABOf haaraa ta’uu baatu iyyuu jarri yeroo kanaa garuu diinaa humna godhachuun dhaaba keenya fi uummata keenya harka diinaatti dabarsitee warra kennuuf yaalii godhaa jirtu, warra haala rakkisaa uummatni Oromoo keessa jiru ilaaluu dhabdee gidiraa uummata keenyaa irraa sadoo mataa isaaniif uummata Oromoo fi mirga isaa diinaaf dabarsanii kennuuf tirtiraa jiraachuu isaanii ti.
Addi Bilisummaa Oromoo dhaaba seeraa fi heera mataa isaa qabuuf rakkoo hundaa dandamatee gantuu fi galtuu yeroo hedduu irra aanee dhaaba as gae dha. ABOn diinaa fi warraa ulee diinaa baattee sochootu kan akka warra gantuu fi galtuu, warra Minilikiif hojjettu Goobaanoota haaraa, kan akka Boordii Filannoo Biyyoolessaan dhiibamee filmaata keessaa haa bahu malee dhaaba kana kan onnee uummata Oromoo keessaa kan isa baasu yoomuu hin jiraatu. ABOn dhaaba jiraachuu fi jiraachuu dhabuu uummata Oromoon wal qabata waan taeef nuti miseensotnii fi deggertoonni ABO biyya Ayerlaand jirru Kora Sabaa maqaa ABOn waajjira dhaaba keenyaa humnaan irraa fudhatame keessatti tae jecha dandaa’amee hundaan ni mormina, dura dhaabbanna, irrattis ni qabsoofna.
ABOn dhaaba karaa nagaan qabsaa’uuf gara karaa nagaatti kan deebi’e ta’ulee dhaabni PP mootummaa dha ofiin jedhu ofiifuu seera kan hin qabne, dhaaba seera qabeessaa fi dhaaba karaa nagaa filata gooluun, ooggantootaa, fi miseesota isaa hidhuu waajjiraalee dhaabichaa cufuu akkuma itti fufetti jira. Mootummaan kun yoo dhuguma biyya sanaaf guddina; saboota biyya sanaaf nagaa waaraa fedha tae yaadaa fi gorsa keenya asii gadii kana akka hojjii irra oolchu cimsinee akeekkachiifna.
1. Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) diiguu fi OPDO biraan bakka buusuu yaaluun kaayyoo facalaee fi hin hojjenne dha. Kana diintoni ABO kanaan dura yeroo yeroon haa yaalanuu malee tokkollee hin milkoofne. Kanaafuu, kaayyoo utuu hin himamni kufe kana atatamaan akka dhaabdani gaafatna, ABOn walabaan akka gara uummata isaa deemee akka dhaaba tokkootti socho’u dandanu akka gootani cimisinee hubachiifna.
2. ABOn waa’ee filannoo, waa’ee waajjiraalee cufamee, waa’ee meeseensota hidhamani ilaalchisee Boordii Filannoo Biyyooleessaa ti iyyaannaa yeroo hedduu galfatus, Boodiin kun sababa quubsaa hin taaneen iyyaannaa tokko illee deebii utuu hin kenniniif jira. Kun utuu seerri walabni jiraatee Boordii kana kan adabsiisuu fi hojii irraa hari’u ture. Nuti miseensotini ABO Ayerlaand Boordii Filannoo Biyyoollee kanaan waan ABO irra gahaa ture cimsinee ni mormina. Mootummaan biyya kana nan bulcha jechu waan deemaan turee fi jiru kana atattamaan sirreessee ABOn filmaataaf akka qophaa’u akka godhu gaafatna. Kana tau baannaan filmata ‘fake’ ta’e kana yoo kan godhamu ta’e filmaata kana booddee rakkoo nagaa fi tasgabbii uumamuu dandau kan itti gaafatamu dhaaba mootummaa ofiin jedhu kana ta’a.
3. Warri galtuu fi galtuun naamusa dhaabaa cabsitanii diinatti duuba kennatanii dhaaba keenya maqaa xureessaa jirtan dhaaba keessani dhiifama gaafatanii , adaba dhaabni keessan, akka heeraa fi seera isaatti, isinitti murteessu fudhatanii gara dhaaba keessani ABOtti akka deebitani maqaa dhaabaan waamicha isiniif dhiheessina. Kana yoo diddanii karaa badii keessa jirtan itti fuftu ta’e hara’a uummatini Oromoo haqisee isin tufeeraa, buri immoo seenaanis xurii qabsoo akka taatanitti isniif barreeffama.
4. ABOn ijaa fi gaachana uummata Oromoo, kallacha qabsoo bilisummaa uummata keenyaa fi abdii fi seenaa uummata Oromoo ti. Nuti miseensotnii fi deggertooni ABO biyya Ayrelaand jirru , akkuma kaleessaa, boris waan dandeenyu hundaan dhaaba keenya ABO bira dhaabbannee diina dhaaba kanaa kan tae, seeraa, heera dhaaba kanaa kan cabsu hundaa, qabsoo haqaa kan uummata Oromoo ABOn geggeeffamu kan faalu, kan jijjiiru, fi kan dabsu hundaa ni mormna, dura dhaabbana, irrattis qabsoofna.
5. Nuti miseensonni ABO biyya Ayerlaand jirru karaan siyaasaa sirriin karaa nagaa qofaa akka tae amanna. Haa tau malee mirga saba keenyaa kan sarbu, fi dhaaba keenya kan diigu hundaa karaa fedhe fi dandaa’amu hundaanuu dura dhaabbannee waan barbaachisu hindaanuu akkuma kaleessa, har’as ,boris dhaabaa fi uummata keenya wajjiin qabsoo hamma bilisummaa saba keenyaatti ni qabsoofna.
Miseensotaa fi Deggertoota biyya Ayeerlaand
#WALLOO: Firaa’ol Ahmadiin maddi rakkoo dhalatee guyyaa kaleessaa jidha ilmaan Oromoo